08/05/2018 - Page 3 sur 3 -
08/05/2018 admintriatra 0
« Amin’izao zava-misy eto amin’ny firenena izao dia miangavy antsika rehetra, n’inona n’inona tsy fitovian-kevitra, mba hiaro ny fianaran’ny zanatsika sy zandrintsika. Isika rehetra dia miara-manaiky fa any am-pianarana no tokony hisy ny mpianatra. Efa …Tohiny
Nihaona voalohany tamin’ ity iraka ambonin’ ny vondrona Afrikanina Ramtame Lamamra ity omaly maraina ny Filoham-pirenena Malagasy, Hery Rajaonarimampianina tetsy amin’ ny lapam-panjakana Iavoloha, izay nahitana ihany koa ny solontena maharitry ny vondrona afrikanina eto …Tohiny
« Fanovana amin’ny ratsy »
Mba noheverina ho mitandro ny fianaran’ny zana-bahoaka ireo milaza azy fa solombavambahoakan’ny fanovana, hay tena mamarina an-kady ireny zana-bahoaka mianatra any amin’ireny sekolim-panjakana ireny. Tsy mihevitra izay ho tohin’ny fanadinana atrehin’izy ireo ato ho ato. …Tohiny
“Ilaina amin’ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ny herinaratra”. Io no nambaran’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin’ny ny lahateny nataony nandritra ny fitonkanana tobim-pamokarana herinaratra Symbion Power, teny amin’ny foibem-pamokarana teny Mandroseza, omaly. Nambarany tamin’izany ihany fa ...Tohiny